Tsigira ICRA uye nyora zvirimo pane yako saiti | Martech Zone
Chipiri, Gunyana 19, 2006 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Dhipatimendi reRuramisiro kutsigira sarudzo yekuti kunyorera webhusaiti yako zvemukati hakukanganisa kutaura kwako kwemahara. Kunyangwe ini ndichitsigira iyo Electronic Frontier Foundation, iyi imwe nyaya yandinowanzo pokana navo. Ini ndinofunga masayiti anofanirwa kunyorwa uye maBhurawuza anofanirwa kuenderera nekukudza kudzora kwevabereki. Ndingafarirewo kuona Injini dzekutsvaga dzichishandisa zvinyorwa zvemukati pamwe ne:
Kupa mawebhusaiti ane Zvemukati Mavara uye hapana zvichemo kuiswa kwekutsvaga injini.
Kupa imwe Injini yekutsvaga yezvinhu zvevakuru.
Kunyora saiti yako kuri nyore neICRA's Label jenareta. Verenga zvimwe nezve avo sevhisi. Ini ndinonyora ese mawebhusaiti emutengi wangu, newewo! Iyo nzira yechiratidzo yakanakisa, ichibvumira vanhu kujekesa kuti kana hupombwe hwakaitwa nehunyanzvi pane kunyatsojekesa. Handifunge kuti iyi ihama huru, vanhu. Ini ndinonyatsofunga kuti uku kuri kungopa imwe nhanho yekungwarira kuchengetedza vana vedu kubva ku porn. Ndinovimba unobvuma!
Gumiguru 5, 2006 pa 7:21 AM
Ini ndangosaina izvi. Ini handimbobvumirana necensorship asi ndinotenda vanhu vanofanirwa kuve nesarudzo. Vanhu vazhinji havadi kuona blog yangu - inovhara misoro senge yechinyakare ngochani, huroyi uye chihedheni pakati pezvimwe zvinhu zvakawanda senge nhau dzese nemafungiro, uye, muchokwadi, nhetembo uye zvimwe zvekunyora zvekunyora. Ndingangodaro ndisingade kuti vamwe varambe basa rangu pahwaro hwezvandinotenda asi mukubatanidza izvi mune yangu saiti, ndinofunga ndiri kubvumira vamwe kuti vaite zvavanoda kuita asi ini ndakasununguka kuita zvandiri kuda ita saizvozvo!
Zvakanaka imwe. Ndatenda neruzivo. x